USimona-Nika yonke into kuYesu-Ukubala ubukumkani
USimona-Nika yonke into kuYesu
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona Juni 26, 2020:
Ndabona uMama, wayenxibe ezimhlophe zonke, entloko kukho isigqubuthelo esimhlophe esimhlophe esasineenkwenkwezi ezincinci zegolide nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. Umama wayevule iingalo zakhe ebonisa ukuba wamkelekile kwaye kwisandla sakhe sasekunene iRosari eNgcwele ende yenziwa ngokungathi ingamathontsi omkhenkce. Umama wayebeke iinyawo engxondorheni, ngaphantsi kwawo kwakuhamba umlambo omncinci wamanzi. Makadunyiswe uYesu Krestu…
Bantwana bam abathandekayo, ndiza kuwe ngenxa yothando olukhulu lukaBawo. Bantwana bam, ukunibona apha ehlathini lam elisikelelekileyo kuzalisa intliziyo yam ngovuyo; Ndiyanithanda, bantwana. Bantwanana bam abathandekayo, INkosi isecaleni kwenu, Ihlala isecaleni kwakho yonke imihla yobomi bakho: Ukwi-umoya opholileyo obuhlunguzela ubuso bakho, kwingoma yeentaka ezivuyisa intliziyo yakho, kwivumba elimnandi elibuyisayo umphefumlo, elangeni elifudumezayo, enyangeni ekukhanyisela ebusuku, kwimvula ewenza umhlaba uchumeke, kumaza olwandle acofa isanti. INkosi, bantwana bam, kuyo yonke into eningqongileyo, zonke izinto zisisipho sayo. Bantwana, INkosi uYesu iyaphila kwaye iyinyani kwi-Sacrament yesibingelelo esikelelekileyo, kulapho akulindeleyo: yiya kuye. Bantwana bam ,guqa ngamadolo phambi kwakhe, nizinikele kuye bonke ubomi benu, mnikeni zonke iimbandezelo zenu, umnike lonke uloyiko, iingxaki, umnike ulonwabo, uthando lwakho, mnike yonke into, bantwana bam. Kwaye ayiyi kulibazisa ukuthuthuzela, ikwambise, ikuthuthuzele. Ndiyanithanda, bantwana, ndiyanithanda kwaye ndifuna ukuba nonke nisindiswe, kungoko ke ndiza ukuza nani kwakhona emthandazweni, bantwana: umthandazo wathi ngentliziyo, ngamandla kunye nokholo. Yomeleza ukholo lwakho, bantwana bam, malunga neesakram ezingcwele. Ndiyanithanda, bantwana, ndiyanithanda. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama kum.
Ukupeyinta nguLea Mallett (umfazi kaMark Mallett). Iyafumaneka kwi uphawu uphawu.com
Ukusa iThemba nguLea Mallett
← Xa ubuKomanisi babuya
Sebenzisa ntoni? →